Taunggyi - The Cherry Land: 11/1/07 - 12/1/07
လပြည့်နေ့ မီးပဒေသာ လှည့်လည် ပူဇော်ပွဲက ပုံတွေပါ.. Camera တစ်လုံးကိုင်ထားရင် ၀င်ရထွက်ရ တော်တော် လွယ်မှန်း အဲ့ဒီပွဲကြမှပဲ သိတော့တယ်.. အဖွဲ့လိုက် တားထားတဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲတွေ ၀င်လိုက်.. အရှေ့က ရိုက်လိုက် ဘေးက ရိုက်လိုက် .. အနောက်ကရိုက်လိုက်နဲ့ ရိုက်တာ ဘယ်သူမှ မတားဘူး.. နောက်မို့ဆိုရင် မီးပုံးအဖွဲ့တွေက အနားတောင် ကပ်ခံချင်တာ မဟုတ်ဘူး.. အခုတော့ Camera လေး ကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ ပုံတွေ စိတ်ကြိုက် ရိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်..
နောက်ဘက်ကပုံတွေကတော့ မီးပုံးပျံကွင်းက ပုံတွေပါ.. KBZ မီးကြီး ၀ုန်းသွားတုံးက ကျွန်တော် Studio 35 ရဲ့ Camera စင်ပေါ်ရောက်နေတယ်လေ.. KBZ ဆိုတော့ အပီပဲဆိုပြီး တက်ရိုက်တာ.. မီးပုံးကြီးကမီးရှို့လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို တည့်တည့်ကြီးလာတော့တာပါပဲ.. မကြာပါဘူး ကျွန်တော်တို့ အပေါ် ၇ပေလောက် အကွာမှာ မီးရှူးတွေ အကုန်လုံး ကွဲပါလေရော.. ပေ ၃၀ မြင့်တဲ့ စင်ပေါ်မှာ ပြေးစရာ နေရာလဲ မရှိ၊ ပုံးစရာ အကွယ်ကလဲ မရှိ၊ ခုန်ချဖို့ကလဲ မဖြစ်တော့ မထူးဘူး ဆိုပြီး ကျွန်တော် မလွတ်တမ်း Camera ကို Burst Mode ပြောင်းပြီး မနားတမ်း ရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်..
မီးပန်းတွေကလဲ စင်ကို လာမှန်တယ်.. တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့.. လူကတော့ သွားပြီလို့ပဲ မှတ်လိုက်တယ်.. ဘောင်းဘီတွေလဲ ပေါက်.. ဖိနပ်တွေလဲ မီးရှူးလောင်နဲ့.. သဲထိပ်ရင်ဖိုပါပဲ.. မျက်နှာကိုလဲ နှစ်ချက် လာမှန်သေးတယ်.. တော်သေးလို့ ဦးထုတ်က ပါးအထိရှည်နေလို့ ဦးထုတ်ပဲ လောင်သွားတယ်.. အဲ့ဒီ ဦးထုတ်ကလဲ ညနေကမှ အေးလို့ဆိုပြီး ၀ယ်ဝတ်ထားတာ.. ကွက်တိဖြစ်သွားတယ်.. ကုတ်အင်္ကျီလဲ မီးတွေ ပေါက်ကုန်တယ်.. အောက်မှာလဲ ကားတွေ ရပ်ထားတာ မနဲဘူး.. အားလုံး မီးတွေ ပေါက်ကုန်ကြတယ်.. အောက်က လူတွေကလဲ ပြေးကြလွှားကြနဲ့ တရုန်းရုန်းကို ဖြစ်လို့.. နောက်ပြီး မီးပန်းတွေက Transformer နား သွားလောင်နေသေးတယ်.. ကြလိုက်တဲ့ မီးပန်းတွေကလဲ အကုန်ဆိုတော့ မြေပြင်တစ်ခုလုံး လင်းထိန်လို့ ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒီအချိန် မင်သက်သွားပြီး ဓာတ်ပုံ မရိုက်လိုက်နိုင်ဘူး.. အဲ့ဒီနေ့ကတော့ ဒီနှစ်အတွက် မှတ်မှတ်ရရ နေ့ပါပဲ.. မီးပုံးကြီးသာ ကွဲပြီး စင်ပေါ်ကြလို့ကတော့ ကျွန်တော် အခုဆို ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေမှန်းတောင် သိမှာ မဟုတ်ဘူး.. တော်သေးတယ်.. အခု ကျန်နေသေးလို့.. :)
ဒီ Post ကတော့ ဓာတ်ပုံတွေ အကုန်ပါပဲ.. ဘယ်သူမှ Post တွေမရေးဘဲ.. ပျောက်နေကြလို့ ရှိတာတွေ အကုန် မျက်နှာ ပူပူနဲ့ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ.. ရဲမြန်မာ ကိုပဲ တွေ့နေရလို့ လာတဲ့သူတွေ အမြင်ကပ်နေ လောက်ပြီ.. ကျွန်တော်လဲ နားပါပြီ.. Cbox မှာ တောင်းဆိုထားတဲ့ Video Clip တွေကိုလဲ ကိုချမ်းတို့ ကိုအောင်မိန်းတို့ ကိုကျော်စွာတို့က ဆက်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ကြပါဦးလို့... ပြောရင်း.. အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်.. :)
ရေးသားသူ yma အချိန် 9:06:00 PM7ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: ဓါတ်ပုံများ, အမှတ်တရ
ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေရဲ့ Website ကနေ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးကို Webcast လွှင့်ပေးခဲ့တာ Local က လူတွေတော်တော်များများက မသိလိုက်ကြဘူးနဲ့တူတယ်.. ကြားမိတဲ့သူတွေကလဲ သိပ်ပြီး နားလည်ကြမယ်လို့ ကျွန်တော် မထင်မိဘူး.. အထူးသဖြင့် တိုက်ရိုက် Internet ကနေ WebBroadcast လုပ်တာကို ကိုယ်တိုင် မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေက ဘာမှန်း သိကြမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဘာလို့ ကျွန်တော် ပြောတာလဲဆိုတော့.. ကျွန်တော်တို့ ဒီလို လွှင့်နိုင်ခဲ့တာကို ဂျာနယ် (၃)ခုမှာပဲ တွေ့လိုက်ရတယ်.. သူတို့ကလဲ ဘာမှ တိတိပပရေးထားတာ မရှိဘူး.. နောက်ပြီး အထင်ကရ IT ဂျာနယ်တွေမှာလဲ အဲ့ဒီသတင်း သဲ့သဲ့တောင် မပါခဲ့ဘူး.. မသိလို့ မထည့်ရတာလား.. သိရဲ့သားနဲ့ ဟုတ်မယ်မထင်လို့ မထည့်တာလား.. တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်မှာပါပဲ..
ကျွန်တော့အထင်တော့ အားလုံးက နယ်တွေဆို အထင်သေးချင်ကြတယ်.. အခု ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ခဲ့တာ အားလုံးရဲ့ အရှေ့မှာ ရှိပါတယ်.. သူတို့တတွေတောင် မလုပ်နိုင်သေးဘူး.. ဘာမှန်းတောင် သိကြမှာ မဟုတ်ဘူး.. ကျွန်တော်တို့ Webcast လုပ်မယ်လို့ ပြောမိတုံးကဆို သူတို့နားလည်အောင် တော်တော်ကို ရှင်းပြယူရတယ်.. တောင်ကြီးက IT မှာ မြို့ကြီးတွေကို ကောင်းကောင်း ယှဉ်လို့ရနေပါပြီ..
ဒီနှစ် နှစ်စ လောက်ကစပြီး တောင်ကြီးက IT မှာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တက်လာတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိလိုက်တယ်.. Internet အတွက် ADSL စရတယ်.. Cyber Cafe အများကြီးပေါ်လာတယ်.. Internet အသုံးပြုခတွေ သက်သာလာတယ်.. Computer နဲ့ Peripheral တွေကလဲ မြို့ကြီးတွေနည်းတူ Uptodate တွေ ဈေးအတူတူနဲ့ ရနိုင်နေပြီ.. ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်တွေ စုစည်းထားတဲ့ MCPA (Shan State), လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ MCIA (Shan State)ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလဲ ဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြီ.. အဲ့ဒီ အဖွဲ့တွေကလဲ နာမည်ခံ ဖွဲ့ရုံ သက်သက်မဟုတ်.. ICT Exhibition ကလဲ တစ်နှစ်ထဲမှာ (၂)ခါ လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်.. Seminar တွေ အပါတ်တိုင်း လုပ်တယ်.. International Recognized Exam တွေ ကျင်းပပေးတယ်.. ITPEC Exam ဆိုရင် ရန်ကုန်နဲ့အတူ တောင်ကြီးမှာလဲကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်.. မန်းတလေးမှာတောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး.. နောက်ပြီး Training တွေလဲ ပေးတယ်.. IT Caravan ဆိုတဲ့ နယ်လှည့်ဟောပြောပွဲ အဖွဲ့ကိုလဲ တောင်ကြီးကို ရောက်အောင် ခေါ်ခဲ့ပြီး.. နည်းပညာဖြန့်ဝေမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်.. ICT Resource Center ကိုလဲ ရန်ကုန်မှာတောင် မရှိသေးတဲ့ Latest စာအုပ်တွေ Printer ကနေထုတ်ပြီး စုဆောင်းနေတယ်.. အခုလဲ Advanced Training တွေ ဖွင့်ပေးဖို့ လုပ်နေကြပြီ်.. Computer, Technological ကျောင်းတွေက မျိုးဆက်သစ်တွေကိုလဲ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင် Well Train လုပ်ပေးနေတယ်.. ဆက်ပြီးတော့လဲ နောက်ထပ်လုပ်သွားကြမှာ ပါပဲ..
အခု တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အဖွဲ့သားတွေကလဲ Professional တွေကြီးပဲ.. BCSc, BCTech, BTech, MCTS, MCSE, MCP, CCNA, DCSc တွေ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရထားတဲ့ သူတွေကြီးပဲ.. လူလုံးထုတ်တယ် ထင်ခံရမှာ ဆိုးလို့သာ လူနာမည်နဲ့ Certificateတွေ တွဲပြီး မပြထားတာ.. သူများတွေ လုပ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်.. တောင်ကြီးသားတွေကို IT နယ်ပယ်မှာ အထင်သေး မခံရအောင် ကျွန်တော်တို့ တတွေ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေကြတယ်.. အခု ဒီ Blog ကို လုပ်နိုင်ခဲ့တာ Webcast တွေ လွှင့်နိုင်ခဲ့တာက အားလုံး စုစည်းမိခဲ့.. ပေါင်းစပ်မိခဲ့လို့ပါပဲ.. တစ်ယောက်ထည်းသာဆို ဘာမှ ရေရေရာရာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး.. ဆက်ပြီးတော့လဲ ကျွန်တော်တို့တတွေ စုစည်းပေါင်းစည်းပြီး တောင်ကြီးသားတွေ ဘယ်မှာမှ သူများတွေထက် နောက်မကြဘူးလို့ လက်မထောင်နိုင်အောင် လေ့လာကြိုးစားအားထုတ်သွားကြဦးမှာပါ..
ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြီးက IT Field ထဲမှာ နောက်ကောက် မကျတော့ပါဘူး.. နောက်ထပ်လဲ အထင်သေးစရာ မလိုတော့ပါဘူးလို့ တစ်ခြားမြို့က လူတွေကို သိအောင် ပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 1:09:00 PM4ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကနေပြီး Live Web Broadcast လွှင့်ခဲ့တာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးတော့ ပွဲအတွင်း Internet ကတဆင့် ကြည့်ရှူခဲ့တဲ့ သူတွေဆီက အကြံပြုချက်လေးတွေ ပြန်ကြားလိုပါတယ်..
ဘာတွေလိုအပ်တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်.. ဘာတွေ ထပ်ထည့်၊ ထပ်လုပ်ပေးသင့်တယ်.. ဘာတွေကတော့ ဖြင့် မကောင်းဘူး.. စသဖြင့်ပေါ့ ၀ိုင်းဝန်းအကြံပြုတာလေး ကြားလိုပါတယ်..
အထူးသဖြင့် Webcast နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ ကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေ ဆီက စကားလုံးတွေ ပြန်ကြားလိုပါတယ်.. အဲ့ဒါမှပဲ ကျွန်တော်တို့လဲ ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီထက်ကောင်းတဲ့ Live အစီအစဉ်တွေကို တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 12:49:00 PM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ yma အချိန် 11:56:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
၅ရက်မြောက်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်းရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ.. မီးပုံပျံကွင်းရဲ့ အရှေ့ဘက် တောင်ပေါ်တက်ပြီး သွားရိုက်ထားတာပါ.. သူများတွေ ဘယ်အချိန်ရိုက်လဲ မပြောတက်ဘူး.. ကျွန်တော် ရိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်း မီးပုံးတွေ ပျက်တာနဲ့ပဲ တိုးတိုးနေတယ်.. ပွဲအစပိုင်းမို့ ထင်ပါတယ်.. လပြည့်နေ့ရောက်ခါနီး ရက်တွေတော့ နေ့ဘက် သွားမရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘူး.. ဘယ်သူမှ မရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ကျွန်တော် ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နဲ့ တူတာပါပဲ..
ရေးသားသူ yma အချိန် 4:37:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
၃ရက်မြောက်နေ့နဲ့ ၄ရက်မြောက်နေ့က ပုံအချို့ပါ..
ရေးသားသူ yma အချိန် 11:38:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်တွင်း တပင်တပန်း ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ မို့ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.. ပွဲတော် ရက်အားလုံးနီးပါး Still Image, Motion Movie အစုံပဲ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ အားလုံးပေါင်း အရေအတွက် (၅၀၀၀) ကျော်ရှိတယ်.. Size ကလဲ 10 GB တော်တော်လေး ကျော်တယ်.. အဲ့ဒီပုံတွေထဲကမှ ပုံအနည်းငယ်ကို ရက်အလိုက် ဖော်ပြသွားပါမယ်.. အခုပုံတွေကတော့ ပြိုင်ပွဲ ပထမနဲ့ ဒုတိယရက်က ပုံတွေပါ..
ရေးသားသူ yma အချိန် 10:32:00 PM 1 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲမှာ ကျောင်းဝတ်စုံနဲ့ ဆုတက်ယူတဲ့ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းကို မသိဘူး..
တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် တစ်ခုလုံး Camera ကြီး တကားကားနဲ့ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံတွေ တဖျတ်ဖျတ် ရိုက်ခဲ့တယ်.. အရင် Camera က Pro Level ရိုက်လို့ မရလို့ Camera တစ်လုံး ပွဲအတွက် ချက်ခြင်း ၀ယ်ပြီး ရိုက်ခဲ့သေးတယ်.. ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်မပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ သူများတွေ ဆုရတော့ ကိုယ်လဲ ၀င်ပြိုင်ရင် ရမှာပဲလို့ အခြောက်တိုက် ဘ၀င်က စွတ်မြင့် လိုက်သေးတယ်.. အခု ဆုရသွားတဲ့ ကောင်မလေးက (၉)တန်း ကျောင်းသူလေး.. ကျွန်တော့်ညီမရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေတယ်.. ညီမလေးကို သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ Album တစ်ခုစာ လက်ဆောင်ပေးထားတာ တွေ့တော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရှက်မိတော့တယ်..
တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ ပုံတွေပါ.. Album တစ်ခုစာ ဆိုတော့ ပုံပေါင်း (၄၀) ပါတယ်.. ပုံတိုင်းနီးပါးကလဲ လက်ရာတော်တော် ကောင်းတယ်..
အားလုံးကို ပြနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် Scan ဆွဲပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..
အဲ့ဒီ ကောင်မလေး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ တွေ့တော့မှ ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ပြန်ကြည့်မိတယ်.. ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်လောက်တဲ့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်း ပုံတွေ သိပ်မတွေ့ဘူး.. ဘာတွေ လိုနေမှန်း မသိဘူး.. စိတ်ကို အကြီးအကျယ် ပျက်မိတော့တာပါပဲ.. ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံး ရိုက်လာလိုက်တဲ့ပုံတွေ မနည်းမနော.. ဒါပေမဲ့ သုံးလို့ရတဲ့ ပုံက မရှိသလောက်ပဲ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာအတွက် ရိုက်ခဲ့မိမှန်း.. ဘာကြောင့်ရိုက်ခဲ့မိမှန်း မသိတော့ဘူး.. အချိန်ကုန် ခံပြီး လိုက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ.. ကိုယ့်အတွက်လဲ အလုပ်မဖြစ်.. သူများတွေအတွက်လဲ အကျိုးမရှိသလိုမျိုး အချည်းနှီး ဖြစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်..
တကယ်တန်း ယှဉ်စတန်းဆိုရင် ကိုယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေက ကိုးတန်းကျောင်းသူလေး တစ်ယောက် လောက်တောင် အဖြစ်မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတယ်.. လူတွေကြားထဲ တိုးဝေ့ပြီး Camera လိုက်ရိုက်ခဲ့မိတာကိုလဲ ပြန်တွေးမိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်မိနေတယ်.. အခု Camera ကို ဘူးထဲထည့်ပြီး တစ်ခါတည်း သိမ်းထားလိုက်ပြီ.. နောက်တစ်ခါ Camera ပြန်ကိုင်ဖို့ တော်တော် စဉ်းစားရ တော့မယ်.. ကိုယ့်အတွက်လဲ၊ သူများတွေအတွက် အကျိုးရှိနိုင်မှပဲ Camera ကိုင်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် တော့တယ်..
အဲ့ဒီလောက် ရိုက်ထားလိုက်နိုင်တဲ့ ကလေးမလေးကိုလဲ ချီးကြူးမိတယ်.. အားလုံးလဲ သဘောကြရင် ချီးကြူးစကားလေး ပြောပေးပါဦး.. တစ်ခြားသူတွေရဲ့ ဆုရ ဓာတ်ပုံတွေလဲ တောင်းထားတာ ရရင် ဆက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 9:37:00 PM 8 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ကြာရက်ကန်းစင်အကြောင်းကို ဒီနှစ် ပြည့်ပြည့်၀၀ မှတ်တမ်းတင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ကတိပေးထားတဲ့အတွက် မသိုးသင်္ကန်းရက် ပြိုင်ပွဲကို သွားရောက်ပြီး ကြာရက်ကန်းစင်နဲ့ ကြာသင်္ကန်း ရက်နေပုံတွေကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ ပါတယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 10:17:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
မနေ့က ညဦးပိုင်းလောက်မှာ ကျွန်တော် အခမ်းအနား (၂)ခုကို မထင်မှတ်ဘဲ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်..
ပထမ တစ်ခုက တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်မှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ပွဲနဲ့ စူဋ္ဌာမုနိဘုရားကို မီးပုံးပျံဖြင့် ပူဇော်လွှတ်တင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီပွဲက စူဋ္ဌာမုနိ ဘုရားကုန်းပေါ်မှာ လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..
၁၃၆၉ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အဲ့ဒီပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာဆရာမတွေ၊ တာဝန်ရှိသူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အနွေးထည်ဂျာကင် တစ်ယောက် တစ်ထည်စီ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီပွဲမှာ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ အနွေးထည်တွေကို မူဆည်နယ်စပ် အထိ လူလွှတ်ပြီး သွားဝယ်ခိုင်းခဲ့တာလို့လဲ သိရပါတယ်.. ကျောင်းသားတွေ အတွက် အဆင်တစ်မျိုး၊ ကျောင်းသူတွေ အတွက် Design တစ်မျိုး၊ ဆရာ ဆရာမတွေအတွက် အရောက်တစ်မျိုးနဲ့ ခွဲခြားပြီး ပေးခဲ့ ပါတယ်.. ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေလဲ ပုံစံတူ အနွေးထည်လေးတွေ ၀တ်ပြီး ပျော်ရွှင်ကြည်နူး နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်..
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ စိန်နားပန် မီးပုံးပျံတစ်လုံး လွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်.. ဘုရားကုန်းပေါ်မှာ လေတော်တော်လေး တိုက်တဲ့အတွက် မှိုင်းခံအပြီးမှာ မီးပုံပျံ အောက်ပိုင်း ပြဲထွက်သွားပါတယ်.. ကုန်းပေါ်မှာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ အပြည့် နေရာယူထားတာမို့ လွှတ်လို့မရရင် မလွှတ်ဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေက တားပေမဲ့လဲ.. မီးဆရာတွေက မရအရ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လက်စွမ်းပြသွားကြ ပါတယ်.. ပြဲသွားတဲ့ နေရာကြီးကို အသင့်ပါလာတဲ့ စရွက်စတွေ၊ ကော်တွေနဲ့ ပြန်ကပ်ပြီး အောင်အောင်မြင်မြင်ပဲ လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.. သူတို့ကိုလဲ ဂုဏ်ပြုဆု အနေနဲ့ ၅၀၀၀၀ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီ မီးပုံးပျံကို မီးပုံးပျံအဖွဲ့က ညလုံးပေါက် ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့လဲ သိရပါတယ်..
Camera မပါလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လဲ Phone က Camera လေးနဲ့ပဲ ရိုက်ခဲ့လိုက်နိုင်ပါတယ်..
ဒုတိယ တစ်ခုကတော့ မြို့တော်ခန်းမမှာ ကျင်းပတဲ့ ဆုပေးပွဲနဲ့ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒီပွဲမှာ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ပိတ်ပွဲမှာ ဆုပေးဖို့ ကျန်ရှိနေသေတဲ့.. ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲနဲ့ သီချင်း အရေးအဆို ပြိုင်ပွဲတွေက ဆုတွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်.. ဒါအပြင် တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် အောင်မြင်အောင် ပါဝင်ကူညီ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ကော်မတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက လူတွေကို ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီပွဲကို ဂျက်မြသောင်းနဲ့ ဒီဒီ တို့ရဲ့ တောင်ကြီး ထာဝရလှသော တန်ဆောင်တိုင် သီချင်းနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား ရိုးရာအကတွေအပြင် တန်ဆောင်တိုင် သီချင်း အရေး၊ အဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့လဲ ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်.. ရှမ်းဝတ်စုံ ကို့ရို့ကားယား ၀တ်ထားတဲ့ ဦးဂျက်ကလဲ တကယ်ပြောတာပါ သီချင်းနဲ့ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီနောက် ပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပရိတ်သတ်အားလုံးက ဦးဂျက်၊ အန်တီ ဒီဒီ (စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်လို့ အန်တီလို့ သုံးလိုက်ပါတယ်..) တို့နဲ့အတူ ထာဝရလှသော တန်ဆောင်တိုင် သီချင်းကို ပါဝင်သီဆို ကခုံကြရင်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 10:14:00 AM 1 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီး ထာဝရလှသော တန်ဆောင်တိုင် (အမျိုးသမီး) MTV
တေးဆို စ၀်နန္ဒီ (ဒီဒီ)
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 10:52:00 PM 1 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 5:36:00 PM7ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
၁၃၆၉ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကြီးကတော့ အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီ။
ပွဲတော်ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားကိုလဲ ယဉ်ကျေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
တေးဆို ဂျက်မြသောင်း၊ စ၀်နန္ဒီ (ဒီဒီ)
အနှိုင်းမဲ့ ဝေဟင်သီချင်းရဲ့ စာသားတွေလဲ တောင်ယံကို ရိုက်ခတ်လို့
အေးမြမြဆောင်းရဲ့အလှမှာ ၀ဲပျံလွှတ်တဲ့ မီးပုံးလေးတွေ
ဝေဟင်ထံမှာ ထာဝရ.. ထာဝရ လှပနေပါစေ..
ခန်းနားထည်ဝါလွန်းလှတဲ့ မီးပုံပျံကွင်းသစ်ရဲ့ ဝေဟင်မှာ
ထူးခြားထွေလာ ဆန်းပြားတဲ့ မီးပုံးပျံများ လွင့်တက်နေတာ..
ကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ် နိုင်းကြည့်ရင် တုနှိုင်းမီလို့တော့မထင်
တန်ဆောင်မုန်းလရဲ့ နေ့တွေ ညတွေ ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့ ပြီးစီးခဲ့ပြီလေ..
လာမဲ့နှစ် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးကို မျှော်လင့်ရင်းဖြင့်....
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 5:31:00 PM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
weeklyeleven မှာ ပါလာတဲ့ သတင်းလေးပါ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပြလို့ ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ တောင်ကြီးသားတွေအတွက် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ရေးသားသူ နိုင်းနိုင်းစနေ အချိန် 4:24:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:20:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:16:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကြီးကို Internet မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် WebCast ထုတ်လွှင့်နိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပံ့ပိုးကြသော အောက်ပါ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အဖွဲ့သားများမှ လေးနက်စွာ ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း စာဖြင့်ဖော်ပြ၍ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ခွင့်ပြုချက်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသော - ပြည်နယ်အကြီးအကဲ
ရုပ်သံ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်း အသုံးပြုခွင့်ပေးသော - Studio 35
မြန်နှုန်းမြင့် ADSL လိုင်း ပံ့ပိုးပေးသော - မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း)
နည်းပညာအကူအညီ ထောက်ပံ့ပေးသော - မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (ရှမ်းပြည်နယ်)
အဆောက်အဦးနှင့် နေရာပေးသော - တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ကျင်းပရေး ကော်မတီ
Computer, Camera နှင့် Network Equipment အချို့ ထောက်ပံ့ပေးသော - Media Transform Group
လိုအပ်သော ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းများသာမက စိတ်ရော၊ ကိုယ်ရော ပါဝင်ဖြည့်စည်းပေး ကြသော - တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အဖွဲ့သားများ
လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးကြသော - Internet မှ ဧည့်သည်များ
မှတ်ချက်။ ။ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေသည် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှ မည်သည့် အဖွဲ့ကိုမှ ကိုယ်စားမပြုသော၊ မည်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏၊ အဖွဲ့အစည်း၏ လွှမ်းမိုးမှုမရှိသော၊ Independence ဖြစ်သော တောင်ကြီးမြို့ရှိ Professional Team တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 12:00:00 PM
ရေးသားသူ နိုင်းနိုင်းစနေ အချိန် 12:50:00 AM3ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 9:02:00 PM6ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 9:00:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 8:59:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 8:57:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 8:47:00 PM3ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
လေကတအားတိုက်လို့ နေ့လွှတ်အရုပ်မီးပုံးပျံသမားတွေ ရွာပတ်ရတာပေါ့။
တာလပတ်ပြားတွေကို ၀ါးလုံးထည့် ထားတဲ့ လေကာအရွက်တွေက ဆွဲထောင်လိုက်ရင် လူကပြိုလဲမတတ်ပါပဲ။
“ ရတယ်၊လေကို ပေးတိုက်လိုက်။ မီးပုံးပျံကို ၀ိုင်းဆွဲထားမနေနဲ့” ဆိုပြီး သူတစ်ယောက်တည်း လိုက်ပြီးမီးဆော်လိုက်ထိုးတယ်။
လေကတိုက်နေတော့ မတက်သေးတဲ့ မီးပုံးပျံနောက်လိုက် ပြီးထိုးရတာပေါ့။
အဲ့လို လိုက်ထိုးပြီးနောက် လေတွေတိုက်နေတဲ့ ကြားမှာ ဘဲရုပ်အောင်မြင်စွာတက်သွားပါတယ်။
တက်သွားပြီးမှ မီးဆရာက တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ဖြောင်းခနဲ မီးဆော်တုတ်ကို ပစ်ချလိုက်တယ်။
မီးပုံးပျံကို အကုန်အကျခံလုပ်ပေးတဲ့ (စပေါ်ဆာ) သူ့လူကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ လက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီး
“ ယုံတယ်နော် ” တဲ့။
ကျွန်တော်ကြွေသွားတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို။
သူ့နံမည်က သငယ် တဲ့။
အဲ့ဒီနေ့ကတော့ သူဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရေးသားသူ Ko Myo အချိန် 11:36:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ yma အချိန် 11:21:00 PM 8 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ yma အချိန် 12:55:00 PM9ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဒီနှစ်အတွက်ချီးမြှင့်မဲ့ ဆုကြေးငွေ အတိအကျကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. click နှိပ်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 2:36:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
မနေ့ညကရာသီဥတုအရမ်းကို ဆိုးရွားလို့ မီးပုံးပျံသုံးလုံးပဲလွှတ်နိုင်ပါတယ်
ကျန်တဲ့မီးများဟာ ဒီနေည ၆ နာရီမှာစတင်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 1:18:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
တောင်ကြီးချယ်ရီမြေရဲ့ WebBroadcasting မှာ တစ်ဒေါင့်တစ်နေရာကနေ ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ Studio 35 ကို တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်...
ယမန်နှစ် ၂၀၀၆ခုနှစ် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးကို တောင်ကြီးမြို့မှာ Live လွှင့်ပေးနိုင်အောင်လို့ အသစ်ရောက်လာတဲ့ ပြည်နယ် အကြီးအကဲကနေပြီး ဖိတ်ခေါ်လို့ Studio 35 အဖွဲ့ တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီနှစ်က Studio 35 အဖွဲ့တွေလဲ အလောသုံးဆယ်နဲ့ တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်လာပြီး Live လွှင့်ဖို့ အပူတပြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရ ပါတယ်.. တန်ဆောင်တိုင် ပွဲစဖို့ ၂ရက်လောက် အလိုမှာမှ ရောက်လာကြပြီး အားချင်း Live လွှင့်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရပါတယ်.. ဘာမှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန် မရလိုက်တဲ့အတွက် သူတို့လဲ အစပိုင်းမှာ တော်တော်လေး ကသီခဲ့ကြ ပါတယ်.. သူတို့အတွက် Studio အခန်းလဲ သီးသန့်မရခဲ့တာနဲ့ အဆောင်တစ်ခုရဲ့ အနောက်မှာ အကန့်တစ်ခုကန့်ပြီး အလျှင်စလိုပဲ လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်.. အခန်းကလေးသေးတော့ သူတို့ ပါလာတဲ့ စက်တွေနဲ့ တော်တော်လေး ပြွတ်သိပ်ကြပ်ညပ်နေပါတယ်.. Announcer အတွက်လဲ လုံလုံလောက်လောက် နေရာ မရတော့ဘဲ အားလုံးက ခပ်ခပ်ခဲခဲ ကြပ်ကြပ်သပ်သပ်နဲ့ ပထမနှစ်မှာ လုံးပမ်းခဲ့ကြရပါတယ်..
သူတို့ရဲ့ Camera အားလုံးကို Cable နဲ့သွားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒီနှစ်တုံးက ကွင်းက ကျဉ်းတော့ သူတို့လဲ နဲနဲ အသက်ရှူချောင်သွားခဲ့ပါတယ်.. Transceiver တွေကိုလဲ ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားကုန်းပေါ်ကို Cable နဲ့ ပြေးပြီး မီးပုံးပျံကွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ Studio အခန်ကနေ လွှင့်ခဲ့ကြရပါတယ်.. တောင်ကြီးမြို့ နေရာတော်တော် များများကလဲ အိမ်ကနေ တိုက်ရိုက် ကြည့်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ အတွက် တောင်ကြီးမြို့မှာ Studio 35 နာမည်ရသွားခဲ့ ပါတယ်.. နောက်ပြီး မြို့ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုလဲ Interview တွေလုပ်ပြီး၊ လွှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်.. အဲ့ဒီနှစ်က TV ကနေ တိုက်ရိုက် လွှင့်တဲ့အပြင် မြို့လည်မှာရှိတဲ့ လူစည်တဲ့ နေရာတွေ ၃၊ ၄ခုမှာလဲ Projector တွေနဲ့ ထိုးပြလို့ မီးပုံးပျံကွင်းအဟောင်းမှာ လူတွေ တိုးကျိတ်ရတာ အနည်းငယ် သက်သာသွားခဲ့ရပါတယ်..
Studio 35 လဲ ပြည်နယ်ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်၊ ခွင့်ပြုချက်တွေနဲ့ တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်လာခဲ့ပြီး၊ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော် တိုက်ရိုက်လွှင့်မှုနဲ့ တောင်ကြီးမြို့မှာသာမက တစ်နိုင်ငံလုံးကပါ သိရှိလို့ နာမည်ပေါက် သွားခဲ့ပါတယ်.. တစ်နည်းပြောရရင် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်မှာ Live လွှင့်ခွင့် ရတာက စလို့ Studio 35 ဆိုပြီး လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်..
Studio 35 ဆိုတာက ရွှေနေခြည်ဆိုတဲ့ Company ရဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ.. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Media Company တွေထဲမှာ ရှေ့အပြေးဆုံး၊ အလုပ်နိုင်ဆုံး Company လို့ ပြောလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်.. သူတို့ရဲ့ Main Studio ကြီးမှာလဲ ရုပ်သံရိုက်ကူးရေးခန်းတွေ၊ Editing အခန်းတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်သံ အရည်အသွေးရှိတဲ့ Mini Cinema တစ်ခုလဲ ရှိပါတယ်.. အခုလောလောဆယ် Studio 35 အနေနဲ့ မြ၀တီ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ကြိုးဝိုင်းထဲက ရင်ခုံသံဆိုတာရယ်.. စနေရုပ်ရှင်ဆိုတာတွေရယ်ကို တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေး နေပါတယ်.. မကြာခင်မှာလဲ ပထမဆုံး မြန်မာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို TV ကနေ ပြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီနှစ် တန်ဆောင်တိုင် Live အတွက်လဲ ပြည်နယ်က ထပ်မံဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး၊ မီးပုံးပျံကွင်းသစ်ကြီးမှာ ပြောင်းလဲ ကျင်းပရမှာဖြစ်လို့ Studio 35 အဖွဲ့တွေလဲ အစောကြီးကတည်းက ရောက်ရှိလို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ ပါတယ်.. သူတို့အတွက် သီးသန့် Studio အဆောင်တစ်ခုရရှိခဲ့သလို လွှင့်တင်ဖို့လဲ စက်အစုံအလင်နဲ့ Camera များစွာနဲ့ မနှစ်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တိုင်ရိုက်လွှင့်တင်နိုင်အောင် နေ့မအား၊ ညမနား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွှက် နေကြပါတယ်..
တောင်ကြီးမြို့ကို ပထမနှစ်မှာ ရောက်လို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက Studio 35 ကိုသိခဲ့ကြသလိုပဲ.. ဒီနှစ်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကနေ Live Webroadcast လွှင့်ပေးလို့ Studio 35 ကို နိုင်ငံအားလုံးကလူတွေ သိရှိလာကြပါပြီ.. Studio 35 ကို မြန်မာမှာသာမက တကမ္ဘာလုံးကပါ သိအောင် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးရဲ့ အရှိန်အ၀ါက လုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲ.. တစ်ခြားတစ်ဘက်ကလဲ Studio 35 ရဲ့ တိုက်ရိုက်လွှင့်ပေးမှုကြောင့် တောင်ကြီးမြို့ တန်ဆောင်တိုင် ပွဲတော်ကြီးကို အိမ်ကနေ မပူမပင်နဲ့ ကြည့်နေနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ အတွက်လဲ တစ်ကမ္ဘာလုံးက တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် ရင်ခုံမြတ်နိုးသူတွေ အဝေးကနေ အားပါးတရ ကြည့်ရှူ ခံစားနိုင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ အဖွဲ့သားတွေကလဲ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးကို Live လွှင့်နိုင်အောင် Studio 35 ဆိုတာကို တောင်ကြီးမြို့အရောက် ခေါ်ဆောင်လာပေးမှု ထပ်မံအားဖြည့်တဲ့ အနေနဲ့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီးကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့က ကြည့်ရှုခံစား နိုင်အောင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး Live - WebBroadcasting ကို ဒါတို့ တောင်ကြီးသားတို့ရဲ့ ပညာနဲ့ စည်းလုံးမှုလို့ လက်ခမောင်းခပ်ပြီး ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာနဲ့ တင်ဆက် ပြသပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်...
ရေးသားသူ yma အချိန် 8:49:00 AM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်, အထွေထွေ
ဓါတ်ပုံပေါင်း (၈၉) ပုံ ပါပါတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 12:16:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဓါတ်ပုံစုစုပေါင်း ၁၃၀ ပါပါတယ်..
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:31:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:28:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:26:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:12:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဟီး ဝက်သားချဉ်ပုံတွေလည်းပါတယ်နော် အွန်လိုင်းကနေစားကြပေါ့ဗျာ
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 10:41:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ချယ်ရီနဲ့ ထင်းရှူး စိမ်းလန်းတဲ့တောအုပ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 11:41:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 11:49:00 AM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 9:18:00 AM5ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: VirtualTour, တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 11:47:00 PM 11 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 8:30:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: VirtualTour, တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 7:55:00 PM4ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 3:26:00 PM3ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ခြင်းပြုလုပ်ရပါတယ် ပြင်ဆင်နေတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ရေးသားသူ အောင်မိန်း အချိန် 12:26:00 PM 10 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
Game Competition Semi 1 Round:
Luxury2defeated by Skadi
Blo Blo Vs Prize (Winner)
Final Competition : Prize Vs Skadi
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 11:16:00 AM 1 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
အညွှန်း: ICT Exhibition
ဒီနေ့ Counter နဲ့ Warcraft Computer Net Game ပြိုင်ပွဲ Semi ပွဲစဉ်နဲ့ Final ပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ..
Warcraft3Semi ပြိုင်ပွဲ ကိုတော့ အခု မနက်ပိုင်းမှာ ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ Counter Final ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး. နောက်ဆုံး Warcraft Final ပွဲနဲ့ အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Counter Strike ပြိုင်ပွဲ ၆သင်းမှာ နောက်ဆုံး Final ရောက်လာတဲ့ (၂)သင်းကတော့ Assasinate နဲ့ Jupiter တို့ ဖြစ်ပါတယ်..
Warcraft ပြိုင်ပွဲ ၁၄သင်းမှာ နောက်ဆုံး Semi (၄)သင်းကတော့ Luxury2vs Skadi နဲ့ BloBlo vs Prize တို့ ဖြစ်ပါတယ်.. အခုပဲ မဲနှိုက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ လုပ်နေကြပါပြီ..
Clan တွေလဲ အားလုံး ရောက်နေကြပါပြီ.. ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ ကြည့်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:21:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ yma အချိန် 12:59:00 AM2ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 7:49:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ရေးသားသူ yma အချိန် 5:39:00 PM 1 ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
သူတို့ပြင်ဆင်နေကြပြီ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရေးလာတာ အခုဆိုရင် အပိုင်း ၄ အထိ ရောက်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့်. စိန်နားပန် မီးပုံးပျံ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခု မှ မပါသေးပါဘူး။ တစ်ချက်ခုတ် ၊ နှစ်ချက်ပြတ် အနေနဲ့ စာဖတ်သူတွေ လည်း ဘယ်သူတွေ ဘာတွေပြင်ဆင်နေပြီးဆိုတာ လည်း သိရတယ်။ မနိုင်းနိုင်းအတွက်လည်း သဲလွန်စ လေးတွေကို ဆွဲထုတ်ကြည့်တာပါ။ မီးဆရာ စိုင်းလောင်ခမ်း ဦးစီးတဲ့ စော်ဘွားမီးကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စော်ဘွားမီးဟာ ၁၈ ရက်နေ့ ဒုတိယ အလုံးမှာ လွှတ်တင်မှာပါ။ အဲဒီအတွက် အခုကတည်းက သေသေချာချာပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ps. စိ်ုင်းလောင်ခမ်းက အထက ၁ က မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မမီးမီး ဆိုတာလည်း သူ မသိပါဘူးတဲ့။ :P တခြား ခေါ်တဲ့နာမည်လေး ရှိရင် လည်း ပြောပြပါတဲ့။ ကဲ မမီးမီးရေ.................................................................
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 8:22:00 AM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်
ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ 2nd ICT Exhibition 2007 (Shan State) မှာ လာရောက်ပြသတဲ့ Company တွေက ပြခန်းပေါင်း (၂၄)ခန်း ပါဝင် ပြသခဲ့ကြပါတယ်..
Student Choice (Taunggyi)
Winter Root (Mandalay)
Blu Ray Company နှစ်ခန်း
ပြပွဲနဲ့အတူ Counter Strike, War Craft ပြိုင်ပွဲ၊ ကွန်ပျူတာ ပန်းချီပြိုင်ပွဲ၊ Computer Quiz ပြိုင်ပွဲတွေလဲ ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်.. Network Game ပြိုင်ပွဲမှာ အဖွဲ့ပေါင်း ၂၀ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး၊ Counter ပြိုင်ပွဲကတော့ Final အဆင့် ရောက်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်.. ပြိုင်ပွဲကို Projector နဲ့ ပြသလို့ Game ၀ါသနာအိုးများ အားပေး ကြည့်ရှူခဲ့ ကြပါတယ်.. Counter နဲ့ Warcraft Final ပြိုင်ပွဲတွေကို ၁၈ရက်နေ့မှာ နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အနိုင်ရတဲ့ အသင်းတွေကတော့ ဆုငွေ ၁သိန်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ရေးသားသူ yma အချိန် 10:14:00 PM0ခု မှတ်ချက် ပေးထားတယ်